Boliska oo qariyey faroxumeyn gabdho loogu geystay bandhig xaflad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Denbe la qariyey.
Boliska oo qariyey faroxumeyn gabdho loogu geystay bandhig xaflad
La daabacay måndag 11 januari 2016 kl 10.57
Festîvala We Are Sthlm. Wêne: Emma Svensson/We Are Sthlm
Ciidamada boliska ayaa ka warhayey faroxumeyn ay kooxa wiilal ah ugu geysteen gabdho badan bandhig xafladeed dhallinyaro oo labo sanno o iskuxigta lagu qabtay Stockholm.
Boliska ayaa xafladan ku tilmaamay mid aysan wax dhibaato ah ka dhacinin, inkastoo gabdho badan oo faroxumeyn loo geystay boliska u soo astakoodeen boliska.
Wargeyska Dagens Nyheter ayaa axaddii shaaciyey warkan.
-– Boliska runta ahaantii waa la socday waxa dhacay. Waxaa intaa sii dheer shaqo fiican bay qabteen sida laygu wargeliyey, goobtana waxay ka ceyriyeen dhowr shakhsi oo gabdho faroxumeeyey, ayey tiri Varg Gyllander oo ah afhayeenka boliska Stockholmh.
– Dhibaatada ma ahan shaqada boliska ay qabteen balse waa guuldarada ah sheegida waxii dhacay iyo waxii laga qabtay, ayey tiri Varg Gyllander.
Boliska Stockhol ayaa sida tan qoral ku sheegay markii bandhiga xafladeed ee We Are uu soo dhamaaday bishii augusti, kaas oo lagu qabtay bartamaha magaalada Stockholm: waxuu ahaa bandhig denbiyada ka dhacay ay yaryahiin ayna yaryahiin inta ruux ee la qabtay marka loo fiiriyo tirada ka soo qayb-gashay.
Laakiin baaritaanada boliska oo wargeyska Dagensk Nyheter helay ayaa muuijnaya sawir midkas ka gedisan. Kooxa wiilal ah ayaa faroxumeyn kula kacay gabdhahii xafladda ka soo qayb-galay. Astakooyin faroxumeyn oo toban gaarayana boliska ayaa loo gudbiyey. Ciidamada boliska ayaa aqoonsaday 50 wiilal ah oo gabdhaha fraxumeeyey. Halka shant maalmood ah xafladda socoday ay boliska xaflada ka cayriyeen dhallinyaro wiilal ah oo 200 ku dhow. Waxaa la sheegay in wiilasha faroxumeynta geystay ay ahaayeen wiilal keligood waddaka yimid oo qaxooti ah.
Qanqaabiyaha oo la hadlayey DN ayaa sheegay in xafladahan ay badanaa ka dhacaa denbiyo la xiriira faroxumeyn galmo. Warbaxin gaaban oo boliska dhacdadaan ka diyaariyey ay ku xusan tahay in wiilal da’yar ay gabdhaha yaryar ee xafladda ka soo qayb-galay isku riixaan oo taa tabsadaan. Laakiin warbaxintan oo boliska arrintan ka qoray ayaa dadweynaha iyo saxaafadda laga qariyey
– Dabcan waxay aheyd in ay sida ay wax u dhaceen sheegno, sababta sidaas u sameynina ma garanyo, ayey tiri,Varg Gyllander.
Peter Ågren, oo madax u ahaa ciidankii boliska ee xafladda qaabilsanaa ayaa DN u sheegay in dhallinyarada faroxumeynta lagu eedeeyey oo ka soo jeeda dalka dibaddiisa ay sabab u tahay in boliska uusan shaacinin sida ay wax u dhaceen. Mararka qaar ku ma dhacno sida ay wax u dhaceen in aan u sheegno, waayo ka cabsanaa in Sverigedemokaraterna ay ka faa’ideystaan ” ayuu Ågren u sheegay wargeyska.
Haddana boliska waxuu ballanqaaday in ay baaraan sida ay wax u dhaceen
– Badana sida caadada tahay boliska waa sheegan sida ay wax u dhaceen iyo haddii wax weyn dhacaan. Sababta aysan hadda sidaas u dhacin ma garan karo, balse waan baarayaa, ayey tiri, Varg Gyllander, boliska Stockholm saxaafadda u qaabilsan Stockholmspolisens presschef.
Taliyaha sare ee boliska Dan Eliasson ayaa wargeyska Expressen asna u sheegay in la baarayo falkan iyo sababta loo qariyey.